Ejipta: Mivàntana avy ao Cairo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2011 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, عربي, македонски, English
Ity lahatsoratra ity dia singa iray avy amin'ireo fandrakofanay manokana ny Egypt Protests 2011 (Hetsi-panoherana Ejipta 2011).
Raha an'arivony ireo Ejiptiana no manao diabe avy any Tahir Square, mangataka ny hitsaharan'ny 30 taona nitondran'ny filoha Hosni Mubarak, mankahery kosa izao tontolo izao.
Na teo aza ny fampanginana tanteraka ny aterineto, nitohy niraraka hatrany ireo tatitra. Ireto ny fantina faramparany tamin'ireo hafatra ahitàna teny 140 avy amin'ny Twitter – izay ny sasany dia avy amin'ireo olona eny an-kianja, mandefa tatitra mivantana avy ao Cairo.
@fustat: R @alaa ♻ @justimage: Androany ilay andro. Tsy misy matahotra na iray aza ireo olona manodidina ahy, mientanentana sy vonombonona fotsiny. #Egypt #jan25
@bencnn: Eny, mandefa tweet sahala amin'i Jack Kerouac amin'ny Red Bull aho satria tsy fantatro hoe rahoviana no ho afaka hi-tweet indray, noho ny tsindry maneritery atao amin'ny fifandraisana
@JustAmira: Ao amin'ny Al Jazeera Mubasher amin'izao fotoana izao #jan25 http://yfrog.com/h5z6jfzj
@SultanAlQassemi: Al Arabiya: Nakatona ny làlana mampifandray an'i Cairo sy Suez. (Suez dia any amin'ny 130 km miala an'i Cairo, mponina 500,000, niatrika fanoherana goavana)
@nolanjazeera: Ok, eto amin'ny onjam-peo indray aho, hadalàna ny omaly! Nogiazan'ny tafika daholo ny camera, solosaina finday, telefaona finday. Nahazo nokia tamin'ny 1995 aho izao saingy mbola mandeha tsara #egypt
@nolanjazeera: Nasaina nandeha nankany amin'ny Liberation Sq izahay somary maneso ihany saingy nivily niankavanana nankany amin'ny mozean'i Cairo mba hohadihadiana #Egypt
@nolanjazeera: Niteny ny manamboninahitra mpibaiko fa fantany fa manao ny asanay izahay saingy manasarotra ny asany izany! “Jazeera no olana” dia niteny taminay koa mba hampitsahatra ny fanaovana tatitra
@sharifkouddous: Voasàva teny amin'ireo toeram-panarahamaso 3 an'ny tafika ary 5 an'olon-tsotra. Notsapatsapaina sy nosavaina taratasy mba hisorohana ny fidiran'ny mpitandro filaminana ao
@shadihamid: Mafàna fo mpanohitra ao Tahir: ‘Mino izahay fa izao no farany’ #jan25 #egypt
@shadihamid: Antso & fampitandreman'ireo mafàna fo: vintana farany ho an'ny mpitondra ny korontana eo ivelan'ny lapan'ny filoha & mampaiasa izany ho anton'ny famelezana ireo mpanao fihetsiketsehana #jan25
@shadihamid: Mafàna fo: niteny tamin-dry zareo ireo lietnà fa nisy ny baiko mampitifitra saingy nosintonina izany, mety ho noho ny tsindry iraisampirenena #jan25
@alaa: tsy mampino ahy hoe gaigy toy izany i mubarak ? nandefa kàondrana 3 mitondra antsy izy mba hanandrana hampihorohoro olona an'aliny?!!! #Jan25
@Aboosh: #Egypt! Izao tontolo izao mihitsy no mibanjina anao androany! Mientanentana hahita anao hijoro ho amin'ny fahafahana & sy ny maha-ianao anao! Meteza ho reharehanay! #feb1
@shadihamid: Tatitra mikasika ny fanafihan'ny kàondran'ny NDP tany ivelan'i Cairo an'ireo fiara fitateram-bahoaka niezaka ny hamonjy ny aty an-tanàna #jan25
@sharifkouddous: Oadray. Amin'ny 10 ora maraina izao ary dia feno olona sahady eto Tahir, tsy mbola fahitako. Ary dia mitohy manonga hatrany izy ity ato #Egypt
@tomgara: Vohikala, avy eo finday, avy eo fiaran-dalamby – Tapahan'i Mubarak sy averiny làlana ny fandrosoana. Ho tonga hatrany amin'ny fandraràny ny fanaovana tavim-boninkazo, na ny fambolena. #jan25